Madaxweyne Xasan sheikh oo shacabka ka dalbaday inay helaan aqoonsiga ama baasaboorka dalka – Radio Daljir
Madaxweyne Xasan sheikh oo shacabka ka dalbaday inay helaan aqoonsiga ama baasaboorka dalka
Diseembar 23, 2013 1:12 b 0
Muqdisho, December 23, 2013 – Madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Xasan sheikh Maxamuud ayaa ka dalbaday shacabka Soomaaliyeed inay qaataan warqadaha aqoonsiga qaranka ama baasaboorka dalka, kaas oo haatan la casriyeeyey.
Wuxuu hay?adaha qaabilsan arrintaas ka dalbaday inay shacabka Soomaaliyeed u fududeeyaan helista baasaboorka oo uu ku tilmaamay in uu yahay mid wax badan u sahli kara howlaha horusocodka dowladda iyo weliba amniga.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in xasiloonida iyo adkaynta amniga guud loo mari karo in dadku helaan baasaboor iyo aqoonsi dhamaystiran oo casri ah.
Madaxweynaha dalka Xasan sheikh Maxamuud ayaa shalay daah-rogay mashruuc diyaarsan oo muujinaya hanaan cusub oo lagu bixinayo baasaboorka dalka, kaas oo ka duwan sidii hore ee loo bixin jiray.
Hay?adda socdaalka qaranka ayaa hore u sheegtay in looga baahan yahay muwadinka in uu haysto warqad dhalasho si uu u helo baasaboorka, sidoo kale waxaa haatan lagu soo kordhiyey hanaan cusub oo adkaynaya kalsoonida baasaboorka dalka.
Koonfurta Kuuriya oo damacsan inay ciidamo hor leh oo la dirira Burcad-badeeda u soo dirto gobolka